Miisaaniyadda Puntland ee maanta wakiillada la hor-dhigay oo aan lagu darin kharash dhan $2.2 Milyan, sababtu maxay tahay? – Kalfadhi
Wasiirka maaliyadda Puntland Xasan Shire Cabdi ayaa maanta golaha wakiillada u sheegay in miisaaniyadda dowladda ee sanadkii hore ay si weyn isu dhintay, madaxyada qaarkood ayaa hoos u dhacay, kuwaas oo ay ku sameeyeen dib u eegis.
Guud ahaan miisaaniyadda Puntland ee sanadka oo dhan ay dowladdu ku shaqayn doonto ayaa ah miisaaniyaddii 2018 oo la soo min-guuriyay.
“Miisaaniyadii sanadkii 2018 waxaa ku yimid Is-dhin baaxad weyn 21.5%, taas oo u dhiganta bishii $1,306,526 halka sanadkii ay tahay $15,678,312” Ayuu yiri Wasiirka maaliyadda.
Madaxyada is dhimay waxaa sabab u ah dhoofkii xoolaha oo yaraaday. Lacagtii ay dekeddu qaadi jirtay (Port Charge) oo aan lahelin iyo canshuuraha berriga qaarkood oo hoos u dhacay.
Wasiirka ayaa sheegay in sababtaas darteed ay uga fursan waayeen in aan wax koror ah lagu samayn miisaaniyadda Puntland ee sanadkan, balse lagu dedaalo uun in la hirgeliyo qorshihii miisaaniyadii hore oo bishii ah $6,000,50 bishii.
Miisaaniyadan ayaa saggaalka bilood ee soo socda waxay ilaa $13,763,385 milyan oo dollar oo dheeraad ah ka filaysaa mashaariicda Bankiga aduunka uu ka wado Puntland oo isugu jira mushaaraad, mashaariic horumarineed, dib u eegista shuruucda iyo xeerarka dowladda, kordhinta dakhliga dowladda iyo kor u qaadista tayadda shaqaalaha.
Miisaaniyadda ayaan loogu dhaqmin sidii loo ansixiyay, sida uu hore golaha ugu sheegay guddigii dhaqaalaha iyo xisaabaadka ee wakiillada bishii Agoosto ee sanadkii hore. Wasiirka ayaase sheegay in ay arrintaas ugu wacnayd koror mushaar shaqaale, hay’ado soo kordhay, qarramayn ciidan iyo raashin kharashkoodu soo biiray oo aan ku talagalka miisaaniyadda sanadka 2018ka ku jirin.
“Si aan xal ugu helno ku dhaqan la’aanta miisaaniyadda waxaa suurtagal noqon wayday in miisaaniyadda 2019 lagu daro kharashka dhan $2,240,376 sanadkii, maadama loo waayay dakhliga lagu daboolo sanadkii” ayuu yiri wasiirku.
Guddiga maaliyadda iyo xisaabaadka ee golaha wakiillada iyo xubnaha kale ee baarlamanka ayaa miisaaniyadda soo akhrinaya toddobaadkan, dabadeedna waxay ka doodi doonaan ansixinteeda iyadoo inta badan sida caadada ah u yeera wasiirka maaliyadda isla markaasna su’aalo ka weydiiya.
Taariikhda Nololshii Xildhibaan Saqar (Wasiir Kuxigeenkii Wasaaradda Shaqada)